Apple inoshandura zuva rekuyerwa kwayo kubva Kubvumbi 25 kusvika 26 | IPhone nhau
Apple inoshandura zuva iro richaunza bharanzi kubva muna Kubvumbi 25 kusvika 26
Apple yakanga yaronga kuunza iyo bhalansi yemari yechikamu chako chechipiri chemari anotevera Kubvumbi 25. Nhasi vavandudza yavo Investor peji kuzivisa kuti vachatofanira kunonoka rimwe zuva, saka vachapemberera chiitiko chinodzidzisa pa Chipiri, Kubvumbi 26 na14: 00 pm Pacific / 17:00 pm Kumabvazuva. Chikonzero ndechekuti ivo vanoda kuenda kumariro aBill Campbell anozoitika pazuva rakarongwa chirevo chake. Pakutanga, hapana aiziva kuti nei kuratidzwa kweApple balance sheet kuchizomiswa, asi kusahadzika kwese kwakabviswa pavakagadzirisa peji ravo kune vanoita mari uye vakawedzera chikonzero chekumisikidzwa uku.
Apple inodzosera kumashure kusefa mari yekuenda kumariro aBill Campbell
Mari yeApple yechipiri yekota kumisikidza yakadzoserwa neChipiri, Kubvumbi 26 na14: 00 pm PT / 17: 00 pm ET nekuremekedza shamwari nemhuri yaBill Campbell, ane mariro achaitika Muvhuro. Vatungamiriri veApple nevashandi vanozoenda kumariro kuti varangarire Bill Campbell nemakore ake mazhinji ehukama uye nebasa kunharaunda yeApple.
Chiitiko ichi chinozotepfenyurwa chaipo uye chinovimbisa kunakidza. Kune rimwe divi zvichave zvinonakidza kana vakati vangani iPhone SE, Apple TV, uye Apple Watches vakatengesa. Kana vakafunga kusiya ruzivo irworwo, zvinova zvinonakidzawo, sezvo kusiiwa ikoko kungareva kuti tarisiro hadzina kuzadzikiswa. Chero zvazvingaitika, 2016 inotarisirwa kunge iri gore rekutanga iro iPhone rinoona kutengesa kwayo kuchidzikira kubva pakauya chizvarwa chekutanga muna 2007. Kune rimwe divi, sezvo isu tese tichitarisira kuti kutengesa kuve "kwakaipa", kana zvikabuda. kuti Ivo vari kutengesa akawanda ma iPhone SEs, mamiriro acho anogona kutendeuka uye Wall Street yaizovimbazve kuvimba nekambani iyo Tim Cook inomhanya. Tichaziva zvakawanda kubva Chipiri chinotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoshandura zuva iro richaunza bharanzi kubva muna Kubvumbi 25 kusvika 26